Home » အသားပေး » ဂရေဟမ် Media Group သို့အတူဝါရှင်တန်ပို့စ်ရဲ့ Arc ထုတ်ဝေရေးလက္ခဏာများ
ဂရေဟမ် Media Group သို့အတူဝါရှင်တန်ပို့စ်ရဲ့ Arc ထုတ်ဝေရေးလက္ခဏာများ
The Washington Post ရဲ့ Arc ထုတ်ဝေရေး ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ကထုတ်လွှင့်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် ဂရေဟမ် Media Group သို့၏လုပ်ငန်းခွဲ ဂရေဟမ် Holdings ကကုမ္ပဏီ၎င်း၏ဘူတာပေးခြင်း Arc ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရယူသုံးပါ။ ဤသည် Raycom မီဒီယာများ၏ပစ်လွှတ်ဒီအတိတ်ဒီဇင်ဘာလ 2018 အောက်ပါအဖြစ်အများအပြားလအတွင်း Arc ရဲ့ဒုတိယအမေရိကန်ထုတ်လွှင့်လိုင်းတခုဖြစ်တယ်။ ထက်လျော့နည်းခြောက်လအတွင်း Raycom ရဲ့ဆိုဒ်များအားလုံး powering အပြင်, Arc တစ်ချိန်တည်းဘောင်အတွင်းတူညီ 40 ဘူတာများအတွက် iOS နဲ့ Android app များကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
"Arc ၏ဗီဒီယို CMS သို့သူတို့အကျယ်ပြန့်နိုင်သမျှပရိသတ်ကိုရောက်ရှိရန်သေချာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီး Real-time မှာသူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေဖို့လိုအပျနည်းပညာနှင့်အတူထုတ်လွှင့်ရန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြား" Scot Gillespie က The Washington Post မှမှာ CTO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်. "ကျနော်တို့ကဂရေဟမ်မီဒီယာကသူတို့ဒီဂျစ်တယ်မဟာဗျူဟာ၏ထိုကဲ့သို့သောအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါဝါမှ Arc အပ်နှင်းထားပြီးကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာနည်းပညာရဲ့ Multi-site ကိုစွမ်းရည်တစ်ဦးသေတမ်းစာသည်နှင့် Arc ချောမွေ့စွာတစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့လက်ရှိနည်းပညာ stack နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးဘယ်လိုအဖမ်းခံရသောလူအရေအတွက်။ "
ဟူစတန်, ဒက်ထရွိုက်, ရော့, San Antonio တွင်, Orlando တွင်နှင့် Jacksonville အတွက် affiliates နှင့်အတူ, ဂရေဟမ်မီဒီယာဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးဘို့ထုတ်လွှင့် content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ Arc ၏ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်သည်ဤ cloud-based system ကိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းသတင်းဗီဒီယိုကိုခြိုးဖောကျထုတ်ဝေရန်ဝဘ်, မိုဘိုင်း, လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်အခြားလမ်းကြောင်းများအဖြစ်မှတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဖြတ်ထုတ်ဝေရန်သတင်းသမားတွေဖွတစ်ခု automated လုပ်ငန်းအသွားအလာ featuring ။ ခိုင်မာတဲ့ multisite စွမ်းရည်သတင်းကဏ္ဍနှင့်စျေးကွက်အကြားမျှဝေအင်အားစိုက်ထုတ်အကြောင်းအရာဖြတ်ပြီးလုပ်တာပိုနည်းတယ်ညှိနှိုင်းဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ ပို. ထိရောက်မှု, ပေး။
"ထုတ်လွှင့်သည့်အတိုင်း, ဗီဒီယို, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အနာဂတ်၏အရေးပါသောအပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်" ကက်သရင်း Badalamente, VP ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, ဂရေဟမ် Media Group သို့ပြောခဲ့သည်။ "Arc အောင်မြင်တဲ့နှင့်ခေတ်သစ်သတင်းကဏ္ဍကိုဗီဒီယိုထုတ်ဝေလုပ်ငန်းအသွားအလာဖို့အခြေခံအဆောက်အဦလုပ်ကွက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဂရေဟမ် Media Group သို့အားလုံးပလက်ဖောင်းမှဒေသခံသတင်းရတဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကြော်ငြာရှင်များအဘို့အသစ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံများတည်ဆောက်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ "
အဆိုပါအစွမ်းထက် Arc ပလက်ဖောင်းယခု AWS ဒြပ်စင်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများပြင်ဆင်မှု, လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ထုတ်လွှင့်များ၏ပို့ဆောင်မှုနှင့် over-the-ထိပ်တန်းဗီဒီယိုကိုလျှော့ချပေးခဲ့ခြင်းအပါအဝင်အမေဇုံက Web Services က (AWS) ၏ထိပ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်အမေရိကန်ထိပ်တန်း 20 စျေးကွက်၏တစ်ဝက်နီးပါးအတွင်းသတင်းအမှတ်တံဆိပ်မောင်း အဆိုပါ AWS တိမ်တိုက်ထဲကနေ။ အမေဇုံ elasticity ကွန်တိန်နာဝန်ဆောင်မှုနှင့်အမေဇုံ elasticity Compute တိမ်တိုက် (EC2) အလျင်အမြန် Arc ပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်နှင့်အကြေးဝါရှင်တန်ပို့စ်ကကူညီပေးခဲ့ကြပါပြီ။
The Washington Post ရဲ့ Arc ထုတ်ဝေရေးအကြောင်း
arc ထုတ်ဝေရေး (www.arcpublishing.com/) သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းခေတ်သစ်ကြေညာသူနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အင်ဂျင်နီယာရဲ့ tools တွေကိုတစ်ခုဆုရ, State-Of-The-Art ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းနှင့် suite ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဝါရှင်တန်ပို့စ်ကတည်ဆောက်, Arc နည်းပညာခေတ်မီစက်သင်ယူမှုနဲ့ AI-powered tools တွေကိုအစုတခုအားဖြင့်တိုးမြှင့်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်ပေး, ဗီဒီယို, ဝက်ဘ်, apps များ, စာရင်းပေးသွင်းခြင်းများနှင့်ကြော်ငြာငွေရှာခြင်းအတွက်ဖြတ်ပြီးရှုပ်ထွေး Multi-site ကိုထုတ်ဝေခြင်းနှင့်ပရိသတ်ကိုလိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်။ arc ကမ္ဘာအနှံ့ကျယ်သေးငယ်နှစ်ဦးစလုံးဖောက်သည်များ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်း powered သိရသည်။ ၎င်း၏အဓိကမှာ, Arc အမြန်နှုန်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ပါသည်: စာဖတ်သူများ, သတင်းကဏ္ဍ, အမှတ်တံဆိပ်, ကြော်ငြာရှင်များနှင့် developer များအဘို့။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-02-18
ယခင်: Lawo BVE2019 မှာဗိုလ်မှူးကုန်ပစ္စည်းကြေညာချက်များလွှတ်တင်!
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လွှင့် Pix: Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ #NABShow @NABShow